Namidin’ny Vavolombelon’i Jehovah Ilay Tany Anisan’ny Ngeza Indrindra ao Brooklyn | Vaovao JW.ORG
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Danoà Espaniola Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Yorobà
20 DESAMBRA 2016
Namidin’ny Vavolombelon’i Jehovah Ilay Tany Anisan’ny Ngeza Indrindra ao Brooklyn
Lafon’ny Vavolombelon’i Jehovah ny 85 Jay Street, tamin’ny talata 20 Desambra 2016. Orinasa maromaro mpampiasa vola no nividy an’ilay izy, anisan’izany ny Kushner Companies sy ny CIM Group ary ny LIVWRK. Tena ngezabe mihitsy ilay toerana satria mirefy 92 903 metatra toradroa. Ao Dumbo, tanàna tena mandroso be any Brooklyn, no misy azy io. Azo anorenana trano ampiasaina amin-javatra isan-karazany ilay izy, ohatra hoe trano fonenana, fivarotana, na toeram-piasana.
Nisy trano maromaro efa simba be teo amin’io toerana io, tamin’ny faramparan’ny 1980 sy teo am-piandohan’ny 1990. Noeritreretin’ny Vavolombelona hanorenana trano fanontam-pirinty ilay tany, tamin’izy ireo nividy an’ilay izy. Nanapa-kevitra indray anefa izy ireo hoe afindra any Wallkill, any New York, ny fanontam-pirinty sy ny fanakambanam-boky ary ny fandefasana entana. Vao haingana izay, dia nafindran’izy ireo any Warwick, any New York, ny foiben’izy ireo tao Brooklyn. Nanomboka nivarotra an’ireo trano nampiasainy tao Brooklyn Heights sy Dumbo àry izy ireo, taona vitsivitsy lasa izay.
Hoy i Richard Devine, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah: “Tsy dia fahita firy ny toerana hoatran’ny 85 Jay Street, rehefa jerena ny habeny sy ny toerana misy azy ary ny zavatra mbola azo ampiasana azy amin’ny hoavy.”
Lafon’ny Vavolombelon’i Jehovah ny 69 Adams